Facebook, Google & xogta ku saabsan qaniimada - The Reward Foundation
Blog Facebook, Google & xogta ku saabsan galmada
adminaccount888 29th July 2019 News Latest
Xogta ku saabsan astaamaha qaawan ee kujira muuqaalka martigelintaan waxay ka socota saaxiibkeena John Carr ee London. John waa mid ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreysa adduunka ee ku saabsan adeegsiga carruurta iyo dhallinta tikniyoolajiyada casriga ah. Waa La-Taliyaha Sare ee Farsamada ee Bangkok-ka caalamiga ah ee fadhigiisu yahay Bangkok-ECPAT International. John sidoo kale waa la-taliye farsamo oo ka tirsan Isutagga Caalamiga ah ee Badbaadada Caruurta ee Yurub, oo ay maamusho Save the Children Italy. Wuxuu xubin ka yahay Golaha La-talinta ee Beyond Borders (Canada). Waxaan soo bandhignay qoraallo kale oo John ah oo ku saabsan Online Waxyaaba Waxyeelo Caddaan Ah, Xaqiijinta da'da iyo Sharciga xumaanta ee Boqortooyada Midowday.
Facebook iyo Google waxay leeyihiin sharciyo aad u adag oo ku saabsan qaawan. Caadiyan waa laga mamnuucay labada qalabba. Waa tan waxa Google ayaa sheegay in
Waxyaabaha Jinsiga Cad
Ha u fidin waxyaalaha wax galmoodka ah ka muuqato ama wax qaawan. Gaadhiga ha ku wadin goobaha sawir-qaadka ganacsiga '. (xoogga la saaray)
Waa tan Facebook-ga siyaasadda
Qaawannimo dadka waaweyn iyo nashaad galmo
Waxaan xakameyneynaa muujinta qaawan ama nashaadka galmada maxaa yeelay dadka qaar ee bulshada ka mid ah ayaa laga yaabaa inay dareen u yeeshaan waxyaabaha noocan ah. Intaa waxaa sii dheer, annaga sida caadiga ah looga saarayo sawirrada galmada si looga hortago wadaagida waxyaabaha aan la isku raacsanayn ama waxyaabaha aan qaan gaarin. ”(Ditto)
Ka tegista Facebook-ga ee aan macquul ahayn, oo si hufan loo adeegsado “Beesheena”, siyaasadahaani waa kuwo macquul ah oo cad. Hadana sida cilmi baaris la daabacay usbuucii la soo dhaafay waxay muujineysaa inaysan u muuqan inay joojiyeen labadaba shirkad aruurinta xog aruurin baaxad leh oo laga helayo goobaha porn-ka iyadoo loo marayo baarayaasha waxay naftooda halkaas dhigay.
Ma qiyaasi karo dad badan oo adeegsada barta internetka ee qaawan si ula kac ah iyagoo oggol inay oggolaadaan Facebook ama Google iyagoo qaadaya macluumaad ku saabsan caadooyinka galmada. Taa baddalkeeda, haddii ay u maleeyeen inay suurta gal tahay in xogtaas lala xiriirin karo dhinacyo kale oo noloshooda internetka ah, gaar ahaan noloshooda tooska ah ee Facebook iyo Google, si adag ayey u diidi doonaan. Haddii shirkadahani ogaadaan tan, maxay u sameeyaan? Maxaa sharci ahaan ama anshax ahaanba ku saleysan? Ma qiyaasi karo inay ka dhacdo EU gudaheeda. Waxaan ka codsan doonaa labada shirkadood inay xaqiijiyaan taasi waa kiiska. Laakiin ma inay ku dhacdaa xukun kasta? Maya.
Sida aad arki doontid, masaafad dhan mayl ahaan Google ayaa ah aruurinta xogta ugu badan ee noocan ah. In kasta oo, in ay caddaalad ahaato, ay u badan tahay in ay yihiin xog aruuriyaha ugu weyn dhammaan noocyada websaydhyada.
Waan hubaa inaan keli ku noqon doonin yaabka, waxa Google iyo Facebook run ahaantii yihiin do Xogta ay ka ururiyaan meelaha sida cad loo mamnuucay?
Miyay pyschoanalytics gaareen heer ay ku ogaadaan danaha qofka galmada ama faahfaahinta inta jeer iyo waqtiga booqashadooda ee noocyada gaarka ah ee goobaha galmada, waxay u oggolaaneysaa mid mid inuu ku tusayo inay u badan tahay inay ka jawaabaan xayeysiisyada ciidaha ciida iyo buugaagta karinta? Jawaabaha boostada fadlan fadlan cinwaanka caadiga ah.
Saynisyahan cusub ayaa shaaca ka qaaday dhammaan!
Maqaal ka mid ah toddobaadkan New saynisyahanka ayaa indhahayga ku qabtay cinwaankan xiisaha badanBadi bogagga internetka ee qaawan ee loo adeegsado internetka waxay soo daadiyaan xogta isticmaaleyaasha ". Cinwaanka maqaalka maqaalku wuu ka duwan yahay - waxay leedahay "Kumanaan goobood oo sawiro qaawan ah ayaa xogta ugu daadiya Google iyo Facebook"). Ma hubo "Daadin" waa ereyga saxda ah haddii baarayaalku meesha ku yaal. Waxaan ula jeedaa Facebook iyo Google isma jabinayaan.
Waan ogahay taas New saynisyahanka had iyo jeer ma aha markhaati la isku halleyn karo oo ku saabsan su'aasha galmada internetka. Marka, waxaan u aaday isha asalka ah, maqaal cilmi baaris ah oo ay daabaceen Jennifer Henrichsen oo ka tirsan Jaamacadda Pennsylvania, Timothy Libert oo ka tirsan Carnnegie Mellon iyo Elena Maris oo ka tirsan Microsoft Research. Cilmi baarista waxaa la qabtay bishii Maarso, 2018 iyadoo la adeegsanayo kombiyuutar ku saleysan Mareykanka. Taasi waxay ahayd pre-GDPR laakiin si kasta oo ay ahayd maadaama mashiinka baaristu uu ka jiray USA ma codsan laheyn.
Halkan waxaa ah Xusuusta furitaanka
Waraaqdani waxay sahamineysaa raadraaca iyo qarsoodiga qarsoodiga ah ee boggaga internetka. Falanqayntayaga shabakadaha internetka ee qaawan ee '22,484% waxay muujisay in xogta 93% ay u daadinayaan xogta isticmaale ee koox saddexaad (ditto). Raadinta goobahaas waxaa si aad ah isugu urursaday tiro shirkado waaweyn ah, kuwaas oo aan aqoonsanney. Waxaan si guul leh u soo saarnay siyaasadaha asturnaanta ee goobaha 3,856, 17% wadarta. Shuruucda waxaa loo qoray sidan oo kale qofku wuxuu ubaahnaan karaa labo sano oo uu ku dhigto kulliyad si uu u fahmo.
Daraasaddeena ka kooban qaybaha dhuun ee tusaalaha ah waxay muujisay 44.97% iyaga ayaa soo bandhigaya ama soo bandhigaya aqoonsi jinsi / jinsi gaar ah ama dano laga yaabo inay ku xirnaato adeegsadaha. (ditto) Waxaan aqoonsanahay sedexda saameynta aasaasiga ah ee natiijooyinka tirada: 1) qatarta / khataraha gaarka ah ee qulqulka xorta galmada iyo noocyada kale ee xogta, 2) khataraha / saameynta gaarka ah ee dadka nugul, iyo 3) dhibaatooyinka la xiriira bixinta ogolaanshaha loogu talagalay isticmaaleyaasha barta internetka iyo baahida loo qabo oggolaansho xaqiiq ah isdhexgalka galmada ee internetka.
Si aan qarsoodi ahayn uma eka
Naftaada u adkee farqada hordhaca ah ee qorayaasha
Hal fiid ah, 'Jack' wuxuu go'aansaday inuu ku daawado filimka 'porn' laptopkiisa. Wuxuu awood u siiyaa 'qarsoon' habka biraawsarkiisa, isagoo u maleynaya in ficiladiisu haatan yihiin kuwo gaar loo leeyahay. Wuxuu jiidayaa goob wuxuuna ku dhejinayaa xiriirin yar oo ku saabsan siyaasada gaarka ah. Ka soo qaadashada degel leh siyaasad qaas ah waxay ilaalin doontaa macluumaadkiisa shaqsiyeed, Jack wuxuu riixayaa fiidiyow. Waxa Jack uusan ogeyn waa in habka qarsoon uu kaliya hubinayo in taariikhdiisa baarista aan lagu keydin kumbiyuutarkiisa. Goobaha uu booqdo, sida iyo sidoo kale raad-raacyada dhinac saddexaad, waxaa laga yaabaa inay fiirsadaan oo ay duubaan falalkiisa internetka. Dhinacyadan seddexaad xitaa waxay ka dhalan karaan danaha Jack ee danaha galmada URL-yada boggaga uu galayo. Waxa kale oo laga yaabaa inay u isticmaalaan waxay go'aansadeen danahoogaas ku saabsan suuqgeynta ama dhista astaamo macmiil. Xitaa waxaa laga yaabaa inay iibiyaan xogta. Jack wax fikrad ah kama haysto qolodan saddexaad wareejinta macluumaadka ayaa dhacaya markay fiirinayso fiidiyowyada. ”
Qarsoodiga galmada waxaay ku fadhida tahay qiyamka asturnaanta sababta oo ah muhiimada ay u leedahay hay'ad galmo, xiriir sokeeye, iyo sinnaan. Waxaan xor u nahay oo kaliya inaannu maareyn karno xuduudaha jirkeenna iyo howlo dhowrsanaanta… Sidaa darteed waxay u qalantaa aqoonsi iyo ilaalin, si la mid ah asturnaanta caafimaadka, asturnaanta dhaqaalaha, asturnaanta isgaarsiinta carruurta, asturnaanta waxbarashada, iyo asturnaanta caqliga. ”
Taasi waa xigasho laga soo xigtay maqaalka ugu weyn. Wax badan ayaa ka jira taas oo macno samaynaya laakiin “asturnaanta galmada ” runtii fadhiiso ka Cardiff walaacyada gaarka ah? Laga yaabee inaysan ahayn, laakiin xaqiiqdi waa inay la mid noqotaa kuwa kale ee aan soo sheegnay. Xaqiiqdii Midowga Yurub waxay u badan tahay inay horayba u sameysay. Haddii aanu qof bixin mooyee “Soo bandhig ogolaansho”, hoos Qodobka 9 ee GDPR ururinta ama haddii kale ka baaraandegidda macluumaadka ku saabsan qof "Nolosha galmada ama jiheynta galmada" waa mamnuuc. Baarayaasha waxay u muuqdeen inay aqbaleen qodobada GDPR. Si kastaba ha noqotee, waxay ogaadeen (a) inaysan dalban adduunka oo dhan iyo (b) wali waa goor hore in la sheego saameynta ay ku yeelan doonaan.
Halkee bay ka tageysaa xaqiijinta da'da?
Markii ururada carruurta ee Boqortooyada Midowday 'ay bilaabeen ololahooda ay ku hormarinayaan wanaagga carruurta iyagoo xayirmaya sida' 18s 'ay u galaan rukunnada galmada, mid ka mid ah doodaha inta badan lagu tuhunsan yahay xaqiijinta da'da-da'da (av) ololayntu waxay ahayd in, lama huraan ahayn, av inuu horseed u “Ashley Madison” seenyooyinka. Dadka laga tirada badan yahay ama rabitaanka galmada gaar ah ayaa loo siinayaa gaar ahaan kuwa nugul.
Soojeedintani waxay ku salaysnaayeen fikrada ah in shirkadaha batrool laftooda ama kuwa jabsada ay awoodaan oo ay samayn karaan isku xirnaan aan sharci aheyn oo udhaxeysa macluumaadka la siiyay iibiyaha av iyo macluumaadka ay soo uruuriyaan dadka soo daabacda sawirada. Oo haddii daabacaha buugaagta iyo iibiyaha av u muuqdaan inay leeyihiin nooc ganacsi ama xidhiidh kale oo midba midka kale ka dhexeeyo markaa, waa hagaag, maxaa loo baahan yahay dheh? Muuqaal guud oo ku saabsan waxyaabaha aad door biddo galmada ayaa la dhisi karaa, oo leh cawaaqib xumo ka dhalan karta xitaa haddii Ashley Madison aysan dib u soo kicin.
Xaqiiqda ah in sameynta isku xirka noocan oo kale ah ay sharci darro ka tahay Midowga Yurub iyo meelo kale oo badan, ayaa la geliyay ama la iska indha tiray. Sida xaqiiqda ah iyada oo qaar ka mid ah xalalka av ee la heli karo - laga yaabee kuwa u imaan doona inay xukumaan av suuqa - isku xirnaanta noocan oo kale ah farsamo ahaan macquul maahan xitaa haddii qof isku dayo.
Aaway codadkaas oo kale kahor intaanu bilaabin isku dayga inaan difaacno carruurta anagoo ololeynayna si loo soo bandhigo? Aaway dhalleeceyntii goobjoogga ahayd ee heerka ay ahayd? Wax walbaa way fiicnaayeen goobihii laga galmooday ilaa aan ka galnay aragtida? Goobaha galmada sida ay maanta u hadlayaan xorriyadda iyo xorriyadda? Waxaan nahay xoogagga jawaab celinta? Uma maleynayo sidaas. Xitaa haddii aysan wax kale beddelin, sidee saxda ah av ay wax uga sii dari lahaayeen wax ka xun waxa ay yihiin hadda iyo ayaa sanado aad u badan?
Haddii aad qiimeyso asturnaantaada ka fogow goobaha galmada
Inta badan goobaha porn-ka ayaa isku sifeynaya inay yihiin “Bilaash”. Iyagu ma aha. Waxaad ku bixinaysaa qaab kale. Waxaad ku bixinaysaa xogtaada, ma aha lacag hore. Sida cilmi-baaristu muujisay, 93% goobaha waxay aruurinayaan oo ay gudbinayaan macluumaadka ku saabsan isticmaalkaaga galmada. Waxaan la yaabanahay 7% ee bogagga umuuqda kuwo aan jirin. Laakiin si kasta oo ay ubadku ugaarsadaan shacabka ayaa uga argagaxsan waxa ay cilmi baaristu muujisay.
Hadaad qiimayso kaliya maaha "Asturnaanta galmada", laakiin asturnaanta nooc kasta ha noqotee, goobaha porn-ka waa malaha meelaha ugu dambeeya ee ay tahay inaad tagto. Way kaa iibinayaan, haddaan webiga qarkooda la arkin, markaas xaqiiqdu waxay tahay in hay'adaha ku dhex safraya biyo-qabatinnada webiga ay leeyihiin.
Sida saxda ah ee loogu dhowaaday, av waxay bixisaa difaacida carruurta. Waxay sidoo kale u furi kartaa waddo illaa heer aad u sarreeya ee asturnaanta adeegsadaha intii ay jirtay weligeedba dadka soo booqda goobaha galmada. Taasi waligeed ma noqon mid ka mid ah ujeeddooyinkeyga ugu weyn nolosha laakiin markaa waa wax lagu qoslo sida arrimuhu u noqon karaan.
Arinka hanjabaada ee jira, qaababka ganacsi ee wadista xogta ee goobaha galmada, malaha waxaa laga yaabaa in looga baahdo inay maamulaan cinwaanno waaweyn oo aan lagaraneyn oo ku saabsan boggooda, iyadoo la xasuusinayo daqiiqad kasta oo 5 ah, oo u sheegaya daawadayaasha, haddii ay sidaas tahay, taasi on this “Bilaash”Macluumaadka goobta ayaa la ururinayaa oo ku saabsan waxa ay eegayaan, iyagoo cadeynaya in loo isticmaali karo in lagu dhiso ama lagu daro sumcadda xayeysiiyaha iyaga. Waa laga doodi karaa inay tani ku dhacdo degel kasta oo ku xiran xog xasaasi ah. Waan ku fiicnaan lahaa taas.
Laga yaabee in shirkadaha batroolka ah looga baahdo inay bixiyaan qalab si taxaddar leh u soo muuqday hal-guji si ikhtiyaar looga hortago wax kasta oo macluumaadka shaqsiga lagu garan karo ee loo wareejiyay ama laga soo ururiyey qofna. Labadan midkood ayaa burburin kara ama dib u qaabayn kara qaabkii ganacsi ee mudnaanta badnaa ee hadda jira. Waxaan dareemayaa inay jiraan wax hubaal ah oo ku saabsan arintaas. Nadaafadda caqliga leh ee porn horeyba waxay uga shaqeynayeen waxa la sameeyo marka xigta si ay noolaadaan.